TechadminLab - Nkọwa Ngwaahịa
Adobe Shockwave ka a kwụsịrị maka Windows
Ọ bụrụ na ị tolite na Ịntanetị, ejiri m n'aka na ị maara banyere Adobe Shockwave. Ihe mgbakwunye nke anyị niile arụnyere na oge ụfọdụ igwu ngwa ngwa na egwuregwu vidio. N'ịbụ nke Macromedia na 1995 gbaghaara, nke e mesịrị nweta Adobe na 2005, ikpo okwu ...
Wụnye ngwa ngwa site na Ụlọ Ahịa Na Ngwaọrụ Windows 10 niile n'otu oge
Ịwụnye ngwa si Ụlọ Ahịa na Windows 10 dị mfe. Naanị ị ga-emepee ngwa ngwa ahụ na ngwa Ụlọ Ahịa wee pịa bọtịnụ Get ka ibudata na wụnye ngwa na PC gị. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ PC ...
Nbudata Firefox: Kpekọrịta faịlụ ruo 2.5GB
Enweghi onu ogugu ndi ozo n'enye ndi oru. N'ezie, e nwere ọtụtụ narị igwe ojii na nchekwa ọrụ na gburugburu. OneDrive, Google Drive, Dropbox, na iCloud Drive bụ nchekwa faịlụ a na-ewu ewu na ịkekọrịta ọrụ n'ebe ahụ. Firefox Send Firefox Send bụ a ...
Otu esi esi mepụta Mgbaghaghachite USB nke Lenovo maka Windows 10
E nwere ọrụ e wuru na Windows 10 iji mepụta ngwa mgbake USB. Ndị ọrụ niile, gụnyere ndị ọrụ Lenovo PC, nwere ike iji ngwá ọrụ ahụ wuru iji dozie Windows 10 USB recovery drive. Nsogbu na ihe nbube ndi ozo ewuru na ya bu na o nweghi ike imeputa ...
Ogologo oge ole ka ị nwere ike iji Microsoft Office enweghị arụ ọrụ?
Ị tinyelarị akwụkwọ Microsoft Office 2019 ma ọ bụ Office 365 n'enweghị ikikere na kọmpụta gị ma chọọ ịmata oge ole ị nwere ike iji ngwaahịa Microsoft Office n'enweghị arụ ọrụ ya? Na ntuziaka a, anyị ga-atụle ogologo oge mmadụ nwere ike iji Microsoft Office ...
Google March 2019 Core Update: Nsonaazụ na Nzọụkwụ a ga-eme
Google eweputara mmelite algorithm na 12th nke March n'afọ a. Tinyere ya, bia na otutu nkowa banyere oke nke mmetụta ya, na ihe niche na saịtị ga-emetụta ya. Ma tupu anyị egwukwuo n'ime ...
Mozilla Firefox 66.0 wepụtara na ụda Egwusiri Nchekwa onwe-egwu
A tọhapụrụ Mozilla Firefox 66.0 ụbọchị abụọ gara aga. Ugbu a, ọ dị na ntinye isi nke Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10. Nchọta Firefox 66.0 na-eme ka a mata: Gbochie njide onwe-egwu. Ịnwere ike ịgbakwunye nnwere onwe, ma ọ bụ gbanyụọ atụmatụ ahụ. Nchọpụta dị mfe site na ntanetịgharịrị ọhụrụ na Onwe ...
Akwụsịla 2.7.3 nke ọma na ọkwa dịgasị iche iche (Ubuntu PPA)
Edidem video editọ wepụtara ọhụrụ ahụhụ-fix mbipute dị nnọọ 11 ụbọchị mgbe ikpeazụ, na decoder fixes na misc obere mmezi Avidemux 2.7.3 ntọhapụ pụta: Vapoursynth ugbu a dynamically lojuru iji zere njehie popup ASF / WMV demuxer idozi BMP decoder fix Re-nyeere PNG decoder Basic zọpụta ugbu a ...
Tinye Cave Akụkọ dị mfe site na ịpị na Ubuntu 18.04, 16.04
NXEngine Evo, idegharia nke ihe egwu ikpo okwu nke kpochapu nke a na-ekpochapu egwuregwu Cave Story, ugbu a dị mfe ịwụnye na Ubuntu Linux n'iji ngwugwu ngwugwu. NXEngine Evo bụ oyiri na-emeghe ma na-edeghachi ihe na-eme ka a na-ahụ maka ịkwanyere elu na Doukutsu Monogatari (a makwaara dị ka Cave Story) kere site na Studio Pixel. ...
A na-ewee KeePassXC 2.4 na Nkọwa DPI maka 4K ihu
Mgbe ọpụpụ beta abụọ, KeePassXC paswọọdụ njikwa 2.4.0 emesị laa azụ. Nke a bụ otu esi etinye ya na Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, na elu. KeePassXC 2.4.0 na-enye aka nhazi usoro nhazi maka ngosipụta nke elu-DPI, na-agbakwụnye ọkachamara data nchekwa data, ọrụ nchọta dị elu, na nyochaa akụrụngwa akụrụngwa KeeShare synchronization data ...
Kid3 Tag Editor 3.7.1 gbaghaara, Esi arụ ọrụ na Ubuntu
Akụrụ nchịkọta akụkọ egwu Kid3 3.7.1 sụgharịrị taa. Nke a bụ otu esi etinye ya na Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10, na elu. Kid3 3.7.1 bụ isi na-eweta ndozi ahụhụ na nwelite ọrụ. Ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ lekwasịrị anya na mbipute gam akporo, nke na akwadozi isiokwu gbara ọchịchịrị, nke ka mma ...
[Ntugharị ọsọ ọsọ] Mee ka elekere gaa n'aka nri nke Top Panel na Ubuntu 18.04
Ntuziaka a dị ngwa ga-egosi otú ị ga-esi gbanwee elekere site n'etiti gaa n'aka nri nke panel n'elu na Ubuntu 18.04 Gnome Shell. Oge na oge bụ ndabara gosipụtara n'etiti etiti elu na Gnome 3 desktọọpụ. Ọ siri ike ...
1 2 3 4 ... 1,570 Osote
Crackdown 3 aka nyocha - Agologo oge echere na-apụta site na limbo
Ihe na-eme ka ihe omume a na-akpọ 'Cataclysms'; Njikwa PC na UI kpochapụ ihe mmelite zuru ezu
NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 Nyochaa Kaadị Ntụle Ihe FT. MSI ogwe aka X ...
AMD Radeon VII 7nm GPU Na-eme Ka Ụzọ Nye Ndị Nyochaa Nleba Ule
Ihe ọhụrụ Windows 10 19H1 Mee na-eweta ngwa nbudata na Windows Mixed Reality
Anwu na-agba ọsọ na PS4 pro karịa Xbox One X, 4K Checkerboarding Jiri na ...
Windows 10 mmelite na-agbaji ọzọ maka ụfọdụ ndị ọrụ - Gbanwee na DNS Google iji ...
Asus na-agbapụ gam akụrụngwa Android na flagship Zenfone 5Z: Nke a bụ otu esi arụnye
FaceTime ahụhụ na-ahapụ iPhone ọrụ eavesdrop na mkparịta ụka; Apple ma ime ihe
PUBG melite #25 ịmachi ugbu a na ule nyocha: Bizon SMG, Canted Sight, Vikendi ...
WhatsApp maka ntanetị ntaneti foto: Nke a bụ otu esi amalite
Samsung Galaxy M10, M20 price, nchekwa variants nkọwa leaked n'ihu nke igba egbe
Ndị otu onye na-eme mkpesa ngwa ngwa nke OnePlus 6T na-eme mkpesa.
WhatsApp, Instagram, Facebook ozi integration: Gịnị ka ọ pụtara maka ndị ọrụ?
Ụdị zombie Mobile nke PUBG Mobile bụ egwu, ihe ịma aka na nke kachasị mma: Nyochaa